ट्राईयाथलनमा स्वर्ण जित्ने सोनीलाई एक लाख पुरस्कारको घोषणा
काठमाडौँ । ट्राईयाथलन खेलाडी सोनी गुरुङ्गले नेपालका लागि स्वर्ण दिलाएकी छिन् । उनले दक्षिण एशियामा ट्राईथालनको पावर मानिने भारतलाई पछि पार्दै स्वण हात पारेकी हुन् ।
नेपालको रमणिय स्थल पोखराको चिसो मौसमलाई तातो बनाउँदै सोनीले नेपालका लागि स्वर्ण हात पारेकी हुन् । उनले निर्धारित ७५० मिटर पौडी, २० कि.मी. साईक्लिङ्ग र ५ किलोमिटर दौड १ घन्टा १३ मिनट ४५ सेकेन्डमा पुरा गर्दै स्वर्ण हात पारेकी हुन् । पौडी र साईक्लिङ्गमा पछि परेकी उनले दौडमा आफुलाई अब्बल राख्दै स्वर्ण हात पार्न सफल भएकी हुन् ।
विजयी गुरुङ्गलाई नेपाल ट्राईयाथलन संघका अध्यक्ष एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटिका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले नगद १ लाख प्रदान गर्ने घोषण गरेका छन् ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका माननिय साँसद दीपक कोईरालाले खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप नगद २५ हजार प्रदान गर्ने घोषण गरेका छन् ।
दोश्रो र तेश्रो स्थानमा भारत रह्यो । भारतकी सरोजनी देवीले १ घन्टा, १४ मिनटका साथ रजत र भारतकै प्रग्न्या मोनानले १ घन्टा १४ मिनट ५७ सेकेन्डका साथ कास्य प्राप्त गरे ।
पोखराको फेवा लेकमा भएको प्रतिस्पर्धामा पुरुष तर्फ भने नेपाली खेलाडी बशन्त थारु कास्यमा चित्त बुझाउन बाध्य भए । उनले निर्धारित दूरी १ घन्टा ३ मिनट र ०६ सेकेन्डमा पुरा गरे । पुरुष तर्फ पहिलो र दोश्रो स्थान भारतले हात पार्यो । भारतका आदर्श एमएन सिनिमोलले निर्धारित दूरी १ घन्टा २ मिनट ३१ सेकेन्ड र बिश्वरजित साईखोमले १ घन्टा २ मिनट ५९ सेकेन्डमा साथ स्वर्ण र रजत प्राप्त गरे ।
मंगलबार दुवाथलनका खेल बिहान ८ बजे बाट सुरु हुने छ ।
पानीमा भिजेर साग विजेताको नगर परिक्रमा (फोटो फिचर)
काठमाडौं । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मानस्वरुप शुक्रबार काठमाडौं नगर परिक्रमा गराइएको छ । खेलाडीहरुलाई काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा नगर परिक्रमा गराउने तयारी गरिएपनि वर्षा र
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भर्खरै सम्पन्न भएको १३औ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता (साग) का पदक विजेता खेलाडीहरूलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने भएको छ । दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट
सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार रकममा अन्योलता, खेलाडीले कति पाउलान् ?
काठमाडौँ । १३औ दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) मा पदक विजेतालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको प्रोत्साहन वापतको रकम बारे बुझाईमा फरक परेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले रकम घोषणा गर्दै
काठमाडौँ । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पदक जितेका खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरे सँगै कसले कति पाउने भन्ने हिसाब किताब शुरु भएको छ । सरकारले